Taliban oo ku dhawaaqday dowlad cusub oo Islaami ah [akhriso magacyada].
Tuesday September 07, 2021 - 18:24:53
Wadatashiyo dheer kadib ayay maanta gelinkii dambe Imaarada Islaamiga ah ku dhawaaqday xukuumad cusub taasi oo maamuli doonta dalka Afghanistan.
Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo ah afhayeenka Taliban ayaa shir jaraa'id ku shaaciyay magacyada xukuumadda cusub.
Dhammaan xubnaha xukumadda ayaa xubno ka ah xarakada Taliban waxayna ubadanyihiin saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin katirsanaa Xarakada.
R/wasaaraha dowladda Islaamiga waxaa loo magacaabay Almulla Max'med Xasan Akhanda, ku xigeenka 1aad ee R/wasaaraha waxaa loo magacaabay Almulla Baraadra Akhanda.
Jagooyinka kale ee xukuumadda ugu muhiimsan waxaa loo dhiibay mas'uuliyiin caan ka dhax ahaa Taliban waxaana kamid ah wasiirka difaaca oo loo magacaabay Mulla Max'med Yacquub oo ah wiil uu dhalay Mulla Max'med Cumar Mujaahid.
Saraajudiin Xaqaani waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha, sidoo kale waxaa lamagacaabay wasiirrada arrimaha sirdoonka,dibadda iyo cadaaladda.
Xukuumaddan waxaa xilalka ugu muhiimsan ka haya saraakiil ku shabadaysan liiska waxa loogu yeero Argagaxisada, waa markii ugu horraysay oo dalka Afghanistan laga dhiso xukuumad islaami ah muddo ku siman 20 sano xilligaas oo Mareykanku uu dalkaan ku qaaday duullaan gardarra ah.
Ciidamada Imaarada Islaamiga Afghanistan iyo kuwa Iiraan oo dagaallamay.
Jamhuuriyad cusub oo lagu dhawaaqay iyo Ingiriiska oo aqoonsaday.
Maxay xubno katirsan Dowladda Farmaajo uga caroodeen hadalkii uu jeediyay Boqor Buur Madoow?
Dhaqaalaha Afghanistan oo sare ukacay sedaxdii Bil ee ay Taliban talada haysay.